Mont Blanc: toetra, jeolojia ary biodiversité | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 17/02/2021 10:33 | Haibolantany
Ny tampon'isa avo indrindra any Eropa Andrefana ary iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny Alpes rehetra dia ny Mont Blanc. Midika tendrombohitra fotsy amin'ny teny frantsay izy io ary eo afovoan'ny tontolo somary tsara tarehy any andrefan'ny Kaokazy izy ary mpifanila vodirindrina aminy izay mamahana ny renirano rehetra manodidina. Amin'ny maha-tendrombohitra be fangatahan'ny mpiakatra tendrombohitra azy dia lasa iray amin'ny malaza indrindra eran'izao tontolo izao izy.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny toetra rehetra, ny jeolojia ary ny fiavian'i Mont Blanc.
1 Fomba fiasa lehibe
2 Fananganana Mont Blanc
3 Flora sy biby ao Mont Blanc
Fomba fiasa lehibe
Fantatsika fa ny fihanihana tendrombohitra dia hetsika mahazatra any an-tendrombohitra. Ary io dia any Mont Blanc dia hetsika matetika be io. Indrindra mandritra ny vanin-taona fahavaratra dia mahita mpihanika sy tendrombohitra maro be manandrana hahatratra ny tampon'ny tampon'isa ianao. Ny voalohany nahatratra ny tampon'ny dia dia i Jacques Balmat sy i Michel Gabriel Pacard tamin'ny 178626 taona taorian'ny nanambaran'ilay geology sy naturalis, Horace-Bénédict de Saussure, valisoa lehibe ho an'izay rehetra mahomby. Ny tanjon'ity geology ity dia ny hahafahana manao kajy ny hahavony farany an'io tampon'isa io. Raha te hanatanteraka ireo fandalinana ireo dia mila mpihanika tendrombohitra izy hahatratra ny tampony.
Mont Blanc dia miorina amin'ny sisin-tany manelanelana an'i Frantsa sy Italia ary andrefan'ny tendrombohitra Caucasus. An'ny tandavan-tendrombohitra Alpes izy ary mipaka hatrany amin'ny faritanin'i Soisa. Manana mampiavaka azy izy ary io dia manana tampon-piramida. Ny tendrony dia any atsimo atsinanan'i Frantsa. Ny haavon'ny tendrony avo indrindra dia 4809 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina. Noho izany, nanjary fanamby ho an'ny mponin'ny tendrombohitra maro izay miezaka ny hahatratra ny tampony mandritra ny vanin-taona mafana.
Araka ny efa nampoizina, na dia fahavaratra aza, ny tampon'isa dia rakotra ranomandry sy lanezy. Ny hatevin'ny voalaza dia miovaova arakaraka ny vanim-potoana. Na izany aza, manana ranomandry maharitra mandrakizay izy io. Izany no mahatonga ny haavon'ny tendrombohitra isaina tsy ho marina tanteraka. Izany dia mitranga amin'ny tendrony vitsivitsy izay rakotra oram-panala. Mandritra ny Mont Blanc massif dia ahitantsika tampon-tendrombohitra maromaro sy iray amin'ireo tehezan-tendrombohitra mitsangana lava indrindra any amin'ny kaontinanta eropeana. Ity hantsana mitsivalana ity dia mihoatra ny 3.500 metatra ny halavany.
Tsy ny zava-dehibe ho an'ny mpitaingina tendrombohitra sy ny hatsaran-tarehy ihany no misy azy io, fa misy lohasaha maro ihany koa izay misy flora sy biby be dia be eo amin'ny tehezan'ilay masibe. Misy glasy marobe izay manimba ny ampahany amin'ireo tevana. Ny glacier lehibe indrindra dia ny Mer de Glace. Izy io no glasy lehibe indrindra any Frantsa ary adika amin'ny ranomasin'ny ranomandry.
Fananganana Mont Blanc
Tendrombohitra izay manana maherin'ny 300 tapitrisa taona. Na izany aza, ny fehezan-teny goavambe hamitana ny endriny rehetra tamin'ny ankapobeny manodidina ny 15 tapitrisa taona lasa izay. Mivalona tanteraka ny rafitra satria ny fiforonany dia vokatry ny fihorakoraky ny crust an'ny tany noho ny fihetsiketsehana anatiny an'ny planeta. Satria ny takelaka any amin'ny ranomasina sy ny kaontinanta dia manana orinasa samihafa amin'ny faran'ny famindrana ny iray ary ny iray kosa mahatonga azy ireo ho maina amin'ireo tandavan-tendrombohitra ireo.
Tamin'izany fotoana izany nandritra ny fananganana an'i Mont Blanc, Pangea no supercontaine tokana. Miresaka momba ny vanim-potoana Paleozoic isika. Eto no nanomboka nivaky ilay supercontient ary farany nizara ho tany maro samihafa. Ny fizotran-javatra izay mitranga ao anatin'ny planeta dia tsy nijanona na oviana na oviana. Tsy maintsy tadidina fa ny maodelin'ny tektonika takelaka dia mbola miasa ankehitriny. Noho io antony io, nandritra ny taona an-tapitrisany maro, dia nitohy ny fihetsiketsehana tao amin'ny hoditry ny tany niteraka an'i Mont Blanc.
Efa amin'ny faran'ny vanim-potoana cretaceous, nanomboka nifandona ny takelaka Apolianina sy ny takelaka Eurasia. Ity fifandonana ny takelaka tektonika ity dia nahatonga ny crust of strata sy vato sedimentary hiakatra amin'ny endrika vala. Mont Blanc no eritreretina tsy inona izany fa ny ampahany amin'ny hantsana vatomamy misy vatobe avy amin'ny fanambanin'ny ranomasina taloha. Ny massif iray manontolo tamin'ny ankapobeny dia nitombo avo noho ny fanerena nataon'ny latabatra afrikanina nandritra ny 100 tapitrisa taona lasa.
Ny lakaly kristaly dia karazana vato izay namorona an'i Mont Blanc. Ireo lakaly ireo dia niforona tamin'ny alàlan'ny famolavolana ny vatolampy noho ny tsindry naterak'ireo takelaka tektonika. Izany no nahatonga ny tendrombohitra hanana tampon-tampon'ny havoana vokatry ny fikaohin'ny karazan-dranomandry isan-karazany. Amin'ny ankapobeny, ny endrika fahitana an'izany rehetra izany dia nanome endrika fisaka izay mampatsiahy antsy.
Flora sy biby ao Mont Blanc
Na dia manana hatsarana mahafinaritra aza ity tendrombohitra ity noho ny fananana endrika mangatsiaka, dia tsara koa ny mifanohitra amin'ireo saha maitso manodidina azy. Ilaina fotsiny ny mahita fa amin'ny faritra rehetra amin'ny saha maitso dia misy karazana biby sy zavamaniry. Maro amin'ireo karazana mitsidika ny tandavan-tendrombohitra no miatrika ny haavon'ny toerana, ny mari-pana ambany ary ny asidra amin'ny tany. Araka ny mety ampoizinao, ny fahavelomana amin'ity faritra ity dia sarotra ho an'ny zava-manan'aina monina eto. Na izany aza, Ny fampifanarahana sy ny fivoarana dia nahatonga ny karazana rehetra ho velona.
Amin'ny lohataona sy fahavaratra dia misy karazana zavamaniry voninkazo, ahitra ary zavamaniry kely hafa maniry eo amin'ny faritra ambany amin'ny tendrombohitra. Ity faritra ambany ity dia misy toe-piainana mahafinaritra kokoa ho an'ny karazany. Manodidina ny massif isika dia afaka mahita konifera toy ny firs sy ny larches. Ny karazana sasany toy ny Ranunculus glacialis dia afaka miaina hatramin'ny 4.000 metatra ny haavony.
Raha ny momba ny fiompiana dia hitantsika fa izy io dia asehon'ny chamois, serfa mena, amboadia mena, karazam-borona, lolo, voromahery volamena, samoina ary karazan-hala sy maingoka sasany. Tsy izy rehetra no mipetraka any an-tendrombohitra toy izany, fa ny sasany kosa mahavita miakatra amin'ny toerana avo izay misy ny lanezy fotsiny. Avo manodidina ny 3.500 metatra ny haavony.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba an'i Mont Blanc sy ny mampiavaka azy ianao.
Tsy mbola misy tobin'ny toetr'andro?
Raha mientanentana amin'ny tontolon'ny toetrandro ianao dia mahazoa ny iray amin'ireo toetry ny toetr'andro izay atolotray ka araraoty ireo tolotra misy:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Mont Blanc
Ny firafitry ny Tany